Muxuu noqon doonaa dareenkaagu haddii marka aad isticmaalayso app iPhone qaarkood screen aad telefoonka ee jirsado gebi ahaanba buluug ah, ka dibna laftiisa reboots telefoonka? Tani hubaal aad cabsi-gelin doono! Gaar ahaan, haddii aad ka mid ah lacag, iyo ma awoodi karo in la dayactiro aad telefoon si degdeg ah. Baadi ayaa ka walaacsan waxaa loo yaqaan screen buluug dhimashada (BSOD). Sida caadiga ah, telefoonka reboots ka dib markii ay soo bandhigeen screen buluug ah dhimashada dhowr ilbiriqsi.
Dadka isticmaala iPhone 5S sheegay baadi this markii ugu horeysay lagu jiro September 2013, isla markiiba dib markii la bilaabay ee 5S. Waxaa jira dhowr sababood oo ay kiciyaan BSOD.
• Dhibaatooyinka la Chine gaar ah
Khubarada ayaa soo jeedinaya in inta badan dadka isticmaala 5S sheegay in BSOD adeegsanayeen taabanaysa isu-diridda iyo Numbers, Pages, iyo barnaamijyadooda Apple iWorks. Qaar ka mid ah dadka isticmaala sidoo kale sheegay in ay la isticmaalayo barnaamijka tafatirka document markay yimaadeen daafaha BSOD. Waxaa laga yaabaa, arrinta dhaliya ay sabab u tahay dhibaatooyinka ka jira Dalka Chine gaar ah. Apple ma soo bandhigo xal loogu baadi tani ay update macruufka 7.0.2.
• Multi-duruufaha sidoo kale u muuqataa in ay sabab u
Ka hor furitaanka ee macruufka 7.0.2 update, dhowr users ayaa sidoo kale sheegay in BSOD waxaa dhaliyey in ay dukaamada markii ay multi-duruufaha u dhexeeya dhowr barnaamijyadooda.
• update Apple ayaa loo qaybiyey cayayaanka ka?
Aqoonyahano badan ayaa sidoo kale tilmaamay in dadka isticmaala October 2013 in BSOD ahaa ma arkin ka hor furitaanka iOS7, iyo laga yaabee, update lahaa wax qalad ah waxa ku jira.
• Arjiyada leheyn in uu ordo dulqaaday A7
Wararka qaar ayaa soo jeediyay in Apple bilaabay qori A7 ay la iPhone 5S iyo barnaamijyadooda qaar ka mid ah, muuqaalada ee telefoonka ma ahaayeen kuwo la socon kara arrintan jab 64-bit. Later, Apple updated oo dhan Chine ay ka Lugood iyo xalin arrintan.
Users qaarkood sheegayaan in BSOD waa dib ula macruufka 8 update, oo waxay arkeen iPhone 6 (Plus) oo muujinaya screen buluug ah dhimashada ka hor rebottling.
Ma jirto baahi ah in la walwalo BSOD maadaama ay jiraan siyaabo dhowr ah ay fududahay in la xaliyo arrintan. Tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in qalabka uu ka Apple rakibay oo dhan updates ugu dambeeyey. Sida arrinta ayaa la xidhiidha barnaamijyadooda dhowr jeer, waxaa lagu talinayaa in barkinta syncing iCloud u barnaamijyadooda sida taabanaysa isu-diridda iyo app Numbers, iyo Pages app.If fursad u shaqeyn waayo, doorasho labaad waa in batoonka iyo button guriga wada riix toban ilbiriqsi, oo isku day in aad dib u adag. Qaabkan reboot fudud kaa caawin kara inaad ka takhalusaan BSOD.
Doorashada saddexaad oo xoog badan abuuraya gurmad u content aad telefoonka ee, iyo resetting telefoonka sidii qalab cusub. Tani masixi doono xogta oo dhan iyo dib telefoonka, sida kaliya hal cusub!
Wondershare Ee Dr. Fone ee macruufka caddayn karo in uu yahay xalka ugu wanaagsan
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (kabashada xogta iPhone) ayaa suuqa ugu jirtay dhowr sano hadda. Waa mid ka mid ah xalka ugu kalsoon loo isticmaalo inuu ka soo kabsado xogta tirtiray taleefanada.
• Ladnaansho xogtaasi la tirtiro
Waxay kaa caawin kartaa inay soo dhiciyaan xiriir la tirtiro, videos, sawiro, wac abuse, iyo fariimaha qoraalka xitaa, iwm Tani software ka Wondershare oo dhan lagu daydo iPhone shaqeeyaa, ka iPhone 4 iyo wixii ka sareeya, dhamaan noocyada iPad, iPod iyo taabashada. Dr. Fone soo kaban karto, xogta laga qalab aad, ka iCloud, ama ka gurmad Lugood iyo sidoo.
• Samee qalabka macruufka aad
Gaare software ayaa dhawaan ku xoogaystay Dr. Fone ay ku daray feature cusub oo lagu magacaabo "dayactir macruufka si caadiga ah." Habkaani wuxuu bixiyaa gargaar si iPod taabto, users iPad, iyo iPhone sida loo hagaajin karo dhibaatooyinka soo food saaray qalabka macruufka, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira nidaamka qalliinka, iyada oo aan sababaya maqal la'aan xogta. Dr. Fone wuxuu diyaariyaa arimo sida screen cad, shaashadda madow, screen buluug, qalab xayiran Apple logo, hab-kabashada, iwm oo kaa caawinaya in aad u jeedi iPod, iPad, iyo iPhone sida ugu fiican ee cusub.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa software caqli kabashada xogta. Waxa ay ku siinaysaa dadka isticmaala ay saddexda doorasho ee inuu ka soo kabsado xogta ay. Waxay sidoo kale soo kaban karto xogta ay ka iCloud, Lugood ama qalab macruufka laftiisa. Dhammaan noocyada macluumaadka sida music, sawiro iyo fariimaha qoraalka ah iwm si fudud loo soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo Wondershare Dr.Fone. Wondershare Dr.Fone Loogu liisan gaar ah u isticmaalaya hal heli karaa $69.95.
Sida loo hagaajin shaashadda buluuga ah ee dhintay Dr. Fone in tallaabooyinka
1.Download Dr. Fone ee macruufka on your computer, ka dibna isku xiro qalab macruufka in aad PC la USB. Software waxay aqoonsan doonaa qalab aad.
2.Select macruufka Fix in feature Caadi ah, oo guji badhanka on bilaabatay. Markaas, software aad keento doonaa inaad kala soo baxdo dambeeyay macruufka version u qalab aad.
3.Once download la soo gabagabeeyo, Dr. Fone toos ah u bilaabi doono dayactirka qalab aad. Toban daqiiqo gudahood, software ka bilaabi doonaa qalab aad hab caadi ah.
Sida ku xusan, ka hor dayactirka Dr. Fone qalab aad aan xogta aad ka telefoonka laga badiyay. Dhibic kaliya ee aad u baahan tahay in la ogaado waa in Dr. Fone soo celin doonaa telefoonka dib ugu hab qufulan haddii aad quful qalab aad hore. Waxa uu noqon doonaa mid aan xabsi phone jabay haddii la jailbroken. Qalabka wuxuu sidoo kale la cusbooneysiin doonaa si macruufka ee version dambeeyay.
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir iPhone Blue Screen of Death